My 5-Star Hotel - 2Game
▪ Author: Orchard Games
▪ Latest version: 0.3.38.11
Sorry, this entry is only available in English, 日本語 and Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.
Let your creativity run wild in this one ofakind experience on mobile! Build, manage and decorate your own hotel. Immerse yourself in the visiting guests’ stories, exchange hotel resources for new décor and create the best looking 5-star Hotel in the world. Your 5-star Hotel!BUILD A 5-STAR HOTEL
Android အတွက် My 5-Star Hotel အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ My 5-Star Hotel apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, My 5-Star Hotel iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် My 5-Star Hotel ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ My 5-Star Hotel ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် My 5-Star Hotel ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: My 5-Star Hotel APK download free My 5-Star Hotel hack My 5-Star Hotel Android Casual My 5-Star Hotel